Ny DistrikanAntananarivo-Renivohitra dia distrika eto Madagasikara, ao aminny tapany avaratra adrefanny FaritaninAntananarivo, ao aminny Faritra Analamanga.
Ny Distrikani Manjakandriana dia distrika eto Madagasikara izay hita ao aminny tapany avaratry ny FaritaninAntananarivo ao aminny Faritra Analamanga. Ahitana kaominina miisa 23 ny ao aminio distrika io izay manana velarana 1 660 1 660 km 2.
Ny DistrikanAndramasina dia distrika ao Madagasikara, ao aminny tapany atsinanananny FaritaninAntananarivo, ao aminny Faritra Analamanga. Ahitana kaominina miisa 11 ny io distrika io sady mananana velarana 1 370 km 2.
Ny DistrikanAmbohidratrimo dia distrika eto Madagasikara, ao aminny tapany avaratra adrefanny FaritaninAntananarivo, ao aminny Faritra Analamanga. I Ambohidratrimo no renivohiny. Ahitana kaominina miisa 24 ny ao aminio disrika io izay manana vela ...
I Mangoro dia onin i Madagasikara, izay mivarina miantsinanana ao aminny Ranomasimbe Indiana eo anelanelani Salehy ao avaratra sy i Ambodiharina ao atsimo, sady manana halavana 300 km. Ao avaratra atsinanan Anjozorobe, faritra Analamanga, no misy ...
FTM MANJAKARAY Fikambananny Tanorani Manjakaray. Ekipa milalao ny baolina lavavala ao Manjakaray,Firaisana faha-dimy,fivondronana Antananarivo voalohany, Faritra analamanga.Mandritra ny taom-pilalaovana 2007 dia lasa nisy FTM 1 sy FTM 2 ny klioba ...
Ny Distrikani Vangaindrano dia distrika ao aminny Faritra Atsimo-Atsinanana eto Madagasikara ao aminny Faritanini Fianarantsoa. Ahitana kaominina mliisa 28 ao aminio distrika io.
Ny anarana hoe Androy dia mety manondro: ny kaomininan Androy ao aminny Faritra Matsiatra Ambony Distrikani Fianarantsoa II taloha. ny Faritra Androy, izay faritra eto Madagasikara ao aminny Faritanini Toliara;
Ny anarana hoe Anosy dia mety manondro: an Anosy Tsararafa izay kaominina malagasy ao aminny distrikani Farafangana, ny Faritra Anosy, iray aminireo faritra 22 eto Madagasikara; an Anosy izay kaominina malagasy any ao aminny Distrikani Tsiroanoma ...
Ny DistrikanIkalamavony dia distrika eto Madagasikara ao aminy tapany andrefanny Faritra Matsiatra Ambony ao aminnyFaritanini Fianarantsoa. Mampitohy azy amini Fianarantsoa ny lalam-pirenena faha-42.
Ny anarana hoe Ihorombe dia mety manondro: ny Faritra Ihorombe ao aminny Faritanini Fianarantsoa eto Madagasikara; ny kaomininanIhorombe any aminny Distrikani Farafangana ao aminny Faritanini Fianarantsoa.
Ny DistrikanIsandra dia distrika eto Madagasikara ao aminy tapanay afovoanny Faritra Matsiatra Ambony ao aminny Faritanini Fianarantsoa. Mamakivaky azy ny lalam-pirenena faha-42 izay mampitohy ani Fianarantsoa amini Ikalamavony.
Retsila dia mpanjaka bara, zanak i Tonanahary, nanjaka nandimby an-drainy. Tao Ranohira no nofìdiny hipetrahana mba hahazoany tsara misakana ny Merina. Tia sady mahery an ady Retsila. Samy niadiany avokoa na ny Mahafaly, na ny Betsileo, na ny Mer ...
Ranavalona no anarana niantsoana ny telo aminireo mpanjakavavy tao aminny Fanjakana merina teto Madagasikara: Ranavalona Voalohany Ranavalona I: nanjaka teo hatraminny taona 1828 ka hatraminny taona 1861. Niaro ny fomban-drazany izy ka nanohitra ...
Imasoandro dia mpanjaka bara tao Ivohibe, zanak i Ratsimamotoa mpajaka tao amin io tanàna io ihany. Rehefa matin alahelo Ratsimamotoa, noho ny nahalasan-ko babo ny vadiny, renin Imasoandro, tamin’ ny ady nataony tamin ny Merina, dia nandimby azy ...
Jasper Tudor Tristan de Salazar François Villon Andrea Mantegna Gei-Ami John Neville 1er marquis Montagu Jean de Coimbra Thihathura Ladislas Hunyadi Chimenti Camicia Alexandre VI Vlad III lEmpaleur Juan de Castro Hercule Ier dEste
Jacques Ier dÉcosse Charles Ier dOrléans Ibrahim Sultan Raoul IX de Montfort Shin Sawbu Cymburge de Masovie Ulugh Beg Yoshinori Ashikaga Paphnuce de Borovsk Ikkyū Sōjun Henri le Navigateur Philippa dAngleterre Merina de Cordoue Charles dArtois Jo ...
Ratsimamotoa dia mpanjakan ny Bara Iantsantsa, rahalahin i Tonanahary sy Ratsimivily, zanak i Rakitroka Ratsileondrafy, mpanjaka bara koa. Tamin’ ny ady nataony tamin’ ny Merina dia lasan-ko babo ny anankiray tamin ny vadin-dRatsimamotoa ary voal ...
Ny Asaramantsina dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny Sakave no eo alohany ary ny Asaramanitra no eo aoriany. Misy koa ny Malagasy manonona hoe Saramantsina, Saramantsy, Asaramanara, Saramaimbo, Asarama ...
Zanabintana no iantsoana ireo vintana valo aminny fanandroana malagasy izay ampifanandrifina aminny lafin-trano avaratra sy atsinanana sy atsimo ary andrefana, ka ny vintana hafa rehetra izay mifandray aminny zoron-trano avaratra-atsinana sy atsi ...
Une Seule Nuit dia ny hiram-pirenena ao Burkina Faso. Izany dia nosoratana teo aloha ny filoha Thomas Σανκαρά, izay ny mpitendry gitara, ary natsangana taminny 1984, raha ny firenena nandray ny anarana ankehitriny, ary soloina ny Hymne Nationale ...
Robert Walpole François-Antoine Pécaudy de Contrecœur Giovanni Battista Barni Friedrich Wilhelm Bierling Hadrian Reland John Philips Charles Coffin Nicolas Racot de Grandval Jacopo Riccati Niccolò Gaburri Michel Dubocage Alexandre Selkirk Frances ...
Eusébio da Silva Ferreira dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Pôrtogaly teraka ny 25 Janoary 1942 tao Maputo ary maty ny 5 Janoary 2014 tao Lisbon
Ny fiteny sinoa dia fiteny voasokajy aminny fiteny sinô-tibetaina. 1.3 lavitrisa mahery ny isanny olona miteny sinoa eto an-tany. Ny teny sinoa dia ao aminny vondron-teninny fiteny sinitìka, izay antsona hoe "sinoa".
I Maoming dia tanàna iray ao aminny faritanini Guangdong, ao aminny Repoblika Entim-bahoakani Sina. Ny kaodim-paostrilay tanàna dia 525000 525100-525400.
Ringo Lam dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpamoaka horonantsary mizaka ny zom-pireneni Repoblika Entim-bahoakani Sina teraka ny 8 Desambra 1955 ary maty ny 29 Desambra 2018 tao Ma On Shan, Hong Kong.
Ny fiteny javaney dia fiteny any aminny nosy Java, any Indonezia. Misy olona 80 tapitrisa, eto an-tany no miteny Javaney, ary tenin-drenny olona 75 tapitrisa izy any Indonezia. Eo aianny fiteny Indonezianina, izy no teny be mpiteny indrindra any ...
Ny sinôgrama notsorina na soratra sinoa notsorina dia anisanny fomba fanoratana ny fiteny sinoa. Izy ireo dia ampiasaina ao aminny Repoblika entim-bahoakani Sina sy any Singapaoro. Izy ireo dia samihafa aminny sinograma nentindrazana ampiasaina a ...
È na è azo è dia ampiasaina aminny Zavatra mba hanehoana ny taratasy "E" ny Dấu Huyền feo. Afaka ihany koa mitambatra aminny "Ê" endrika "Ế". è dia ampiasaina koa aminny teny masedoniana toy ny mitovy ny taratasy ianareo aminny fasana Ѐ, ѐ. Ny ta ...
Wu Yonggang dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Repoblika Entim-bahoakani Sina teraka ny 1 Novambra 1907 tao Jiangsu ary maty ny 18 Desambra 1982
Ny horohorontany taminny taona 2010 tany Yushu dia horohorontany nitranga tao aminny faritani Qinghai tao aminny faritanin Yushi taminny 14 Aprily 2010 taminny 7 ora 49, ora tany an-toerana. Ny herinilay hororohontany dia eo anelanelanny 6.92, sy ...
Xie Jin dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Repoblika Entim-bahoakani Sina teraka ny 21 Novambra 1923 tao Shaoxing ary maty ny 18 Oktobra 2008 tao Zhejiang
Ny fiteny Gen dia teny Kwa avy aminny teny Gbe, any atsimo-antsinanani Togo sy any Benin ny ankabeazanny olona miteny Gen. Tenny Niger-Kongo io fiteny io, otra ny teny avy aminny vondrona Gbe, ary teny tônaly izy io. Misy eo aminny 320.000 eo ny ...
Ny Gangnam Style dia tokana K-pop ny koreana tatsimo mpiangaly mozika, PSY. Ny lalana navoaka taminny jolay 2012 ny voalohany tokana ny fahenina ao aminny rakitsary mitondra ny lohateny hoe PSY 6, Ampahany 1, ary nanomboka avy aminny toerana 1 ao ...
Carthage na Carthago dia tanàna tonizianina any avaratra andrefani Tunis. Ny tanàna Punique taloha dia potiky ny romana taminny -146, namboarinny Romana izy taminny androni Jules Caesar ary lasa renivohitry ny Africa proconsularis izy taminny and ...
Ala mandray betsaka rotsakorana ny alamorana. Mandray rotsakorana 250-450 sm isan-taona aminny tany mafana ny alamorana. Ny lehibe indrindra aminny alamorana eto aminizao tontolo izao dia ny alamorana Amazon. Misy karazana zavamananaina betsaka k ...
Ny fiteny semitika afovoany dia sampanny fiteny semitika tenenina ao afovoani Azia Andrefana, izay ahitana ny fiteny hebreo, ny fiteny ogaritika, ny fiteny moabita, ny fiteny fenisiana, ny fiteny arameana, ny fiteny arabo sy ny fitenim-paritra av ...
Ny Skitiana na Skita na Sita dia vondrom-poko indô-eorôpeana tao Eorazia izay mpifindrafindra monina sady miteny amin ny fiteny iraniana. Any Azia Afovoany no fiavian ny Skitiana. Nahatratra ny fara tampon ny heriny izy ireo teo anelanelan ny tao ...
Ny fiteny semitika atsimo dia sampanny fiteny semitika tenenina ao aminny tapany atsimoni Azia Andrefana. Ny fiteny semitika atsimo dia ahitana ny fiteny arabo, ny fitenim-paritra avy aminy ary ny fiteny maltey, ireo fiteny ao aminny tapany atsim ...
Ny fiteny semitika avaratra-andrefana dia sampana jeografikan ny fiteny semitika izay hita any avaratra andrefan ny amin ny faritr i Azia Andrefana, izay sampan ny fiteny semitika andrefana. Ny fiteny semitika avaratra-andrefana dia manisy tovona ...
Ny abidy arameana dia abidy tsy ahitana zanatsoratra fa renisoratra nampiasaina taminny Andro Taloha. Abjady toy ny ankamaroanny abidy anoratana ny fiteny semitika maro ny abidy arameana. Io abidy io dia nanana ny lanjany eo aminny tantara satria ...
Ny voamadilo na kily na madiro dia hazo zavamaniry mitondra voany azo hanina izay zanatany Afrika tropikaly. Ny karazana Tamarindus dia, midika izany fa ity karazana ity ihany no ao anatiny. Ny kily na madiro dia karazan-kazo avy any aminny farit ...
Ny antrendry dia zavamaniry any amin’ ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany avy any Afrika Avaratra sy avy any Azia Atsimo-Atsinanana ary any India, volena manerana izao tontolo izao any amin’ireo faritra manana toetany mafana sy maina. Phoe ...
Ny fitaterana an habakabaka dia asa momba ny fitaterana mpandeha na entana izay atao eny amin ny habakabaka atao amin ny alalan ny fiaramanidina, izay mahafaoka koa ny sehatra ara-toekarena mamondrona ireo asa lehibe na fanampiny mahakasika izany ...
Ny fiteny inuktitut, dia anisanny fiteny teratany ao Kanada. Io fiteny io dia voapirina ao aminny vondronny fitenyu inuit ; ny fiteny hafa ankohatry ny fiteny inuktitut anatinio vondrona io dia ny fiteny inupiaq, izay tenenina any Alaska, ny fite ...
Adolf Bechtold dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Alemaina teraka ny 20 Febroary 1926 tao Franckfort/Main ary maty ny 8 Septambra 2012 tao Franckfort/Main
Christian Ernst Neeff dia mpahaisiansan-javaboahary mizaka ny zom-pireneni Alemaina teraka ny 23 Aogositra 1782 tao Franckfort/Main ary maty ny 15 Jolay 1849 tao Franckfort/Main
Carl Friedrich Mylius dia mpaka sary mizaka ny zom-pireneni Alemaina teraka ny 10 Janoary 1827 tao Franckfort/Main ary maty ny 1 Janoary 1916 tao Franckfort/Main.
Filazantsara sinôptika na Evanjely sinôptika na Vaovao Mahafaly sinôptika no ilazana ireo filazantsara telo voalohany ao amin ny Baiboly, dia ny Filazantsara araka an i Matio sy ny Filazantsara araka an i Marka ary ny Filazantsara araka an i Liok ...
Ny Mesia dia irakAndriamanitra voatendry sy voahosony hamonjy ny olombelona. Ny fivavahana jiosy sy kristiana ary silamo no tena ahitana ny finoana ny amin’ny Mesia nefa ny fivavahana hafa koa dia mety hanana izay mitovy amin’ny atao hoe Mesia. A ...